कोरोना संक्रमण दर स्थिर - स्वास्थ्य | Kantipur TV HD
कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दुई सातायता स्थिर जस्तै देखिएको छ । नयाँ संक्रमित एक सयजना आसपासमा थपिइरहेका छन् । संख्यामा खासै ठूलो तलमाथि छैन । यसको कारण के हो त ?
सोमबार तीन हजार ६ सय ८१ जनामा परीक्षण गर्दा १ सय २५ संक्रमित थपिए । माघ ३० को अवस्था पनि यस्तै थियो । त्यो दिन ४ हजार नमुना परीक्षण गर्दा १ सय २७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसयता हरेक दिन सय जना आसपासमा संक्रमित थपिइरहेका छन् । शुक्रबार ९७, शनिबार ८८ र आइतबार ८० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । ती दिनमा सोमबारको तुलनामा परीक्षण केही कम थियो । यो तथ्यांकले संक्रमणदर स्थिरजस्तै रहेको देखाउँछ । यसको कारण के हो त ?
संक्रमितको संख्या एक सय जना आसपास थपिनुलाई सामान्य मानी नमुना परीक्षण गर्ने सरकारी प्रयोगशालाको संख्या ८३ बाट ३३ मा झारिएको छ । आवागमन सामान्य अवस्थाको जस्तै छ । कहीँकतै कुनै रोकावट छैन । तर सावधानीमा बेवास्ताले छिमेकी देश भारतको महाराष्ट्रमा फेरि लकडाउन गर्नुपरेको वास्तविकतालाई सरकार मात्र होइन, सबैजसोले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । संक्रमणविरुद्धको खोप लगाउन थालिसकेकाले पनि जोखिमप्रति बेवास्ता गर्ने क्रम बढेको हो ।
खोपले आशाको सञ्चार गराए पनि अहिले पनि ४३ संक्रमित आईसीयू र ११ जना भेन्टिलेटरमा छन् । संक्रमणलाई कम आँक्न हुँदैन भन्ने तथ्य भारतका कतिपय राज्यमा देखिएको छ, जहाँ लकडाउनसम्मको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ ।
खोपको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान नै भएन
खोपको प्राथमिकता निर्धारणमै प्रश्न
पाँच वटा काउन्सिललाई एउटै बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी
कोरोना भाइरसविरुद्ध भोलिदेखि दोस्रो चरणमा खोप लगाइँदै